Hetsika etsy amin’ny 13 mey : feno ny fandaharam-potoan’ny depiote ho any amin’ny fandresena | NewsMada
Hetsika etsy amin’ny 13 mey : feno ny fandaharam-potoan’ny depiote ho any amin’ny fandresena
Araka ny efa nanterin’ireo depiote ho an’ny fanovana, herinandro ho an’ny fanapahan-kevitra sy hizorana any amin’ny fandresena izao. Efa voalamina ny fandaharam-potoana rehetra hatramin’ny asabotsy, iarahana amin’ny vahoaka etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey.
Hisantarana izany ny diabe hakan’ny depiote ireo mpianatra eny Ankatso sy ny Seces izao maraina izao. Hitohy amin’ ny fakana ireo mpiasan’ny minisitera na sampandraharaham-panjakana hafa izany avy eo. Hifamotoana eo amin’ny kianjan’ny 13 mey izy ireo avy eo. Hitohy ny alakamisy izany, amin’ny alalan’ny fampitam-baovao lehibe, araka ny nambaran’ ny mpandaha-teny, omaly. Hisy rahateo mpanakanto lehibe hanafana izany. Ho an’ny zoma kosa, hanao hetsika eny amin’ny HCC Ambohidahy izy ireo, hanehoana fa tokony efa hovalin’ireo mpitsara ao Ambohidahy ny fitakiana ny hialan’ny mpitondra sy ny forongony.
Hamaranana izany ny hetsika lehibe ny asabotsy izao ary efa karazan’ny fandresen’ny tolona amin’ ny alalan’ ny rindran-kira lehibe “Tapolaka glady” hiarahana amin’ ny tarika Rossy. “Hanehoanay ireo hiran’ny tolona sy fanohanana ny vahoaka izany”, hoy ity mpanakanto ity tamin’ny teny fohy nataony.
Tsy maintsy misy solontenan’ny depiote 73
Ankoatra izany, nohitrikitrihin’ireo depiote tamin’ny lahateny fa hataon’ireo mpanelanelana an-jorom-bala sy hailika izy ireo. “Tsy noraharahan’ny CFM isika. Isika koa, tsy te-halalala azy. Hany mba niresaka sy naka hevitra tamintsika hatramin’izao ny FFKM”, hoy izy ireo. Momba ny feo miely sy ny karazana fifanarahana any ambadika any, na koa fanelanelanana etsy sy eroa kosa, nohitsin’ireto depiote ho an’ny fanovana ireto fa tsy hanaiky izany izy ireo raha tsy eo hatrany ny solontenan’izy 73 mianadahy. “Avelao ho raharahanay samy malagasy ity… Aty aminay depiote sy ny vahoaka ny fanalahidin’izao krizy izao”, hoy ihany izy ireo.